Fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy | Vaovao momba ny dia
Ny faran'ny herinandro dia fotoana mety indrindra hanaovana fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy. Tsy maninona izay ora amin'ny taona. Raha ny marina dia tsy mila mandeha lavitra akory ianao na mandany vola fanampiny satria any amin'ny Saikinosy Iberia dia mahita safidy mahatsikaiky be dia be isika mandritra ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy.
Ireto misy toerana tsy manam-paharoa fitsidihana mandritra ny fitsangatsanganan'ny ankizy amin'ny faran'ny herinandro. Miaraka aminay ve ianao?
1 Dinópolis any Teruel
2 Ny Oceanogràfic any Valencia
3 Ny tranon'ny Ratoncito Pérez any Madrid
4 Ski any Granada
Dinópolis any Teruel
Nisy ny dinôzôro ary fantatr'i Teruel tsara izany. Dinópolis dia valan-javaboary tsy manam-paharoa any Eropa natokana ho an'ny paleontôlôjika sy dinôzôro, izay misy tavela manan-danja ao amin'ity faritany Aragonese ity.
Hatramin'ny nidirantsika tao Dinópolis Teruel dia toa nifindra tany amin'ny Jurassic Park izahay. Manomboka ny traikefa nahafinaritra tao amin'ny montage "Travel in time" isika, izay misy fitsangatsanganana lohahevitra izay misy effets manokana miaraka amin'ireo dinôzôro animatronic izay manome ny tahotra hafahafa.
Etsy ankilany, i Dinópolis koa dia manana tranom-bakoka Paleontological izay mampiseho fôsily, replika, lalao ary audiovisual tany am-boalohany mitambatra mba hanolorana fitsangatsanganana miavaka amin'ny paleontolojia. Azo atao ihany koa ny mahita mpahay siansa sy paleontologista miasa.
Ny fitsidihana ny tranom-bakoka matetika dia tarihina ary isaky ny efitrano no hanazavany amin'ny antsipiriany ny tsiambaratelo nafenin'i Dinópolis. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fananana zavatra manintona sy hetsika samihafa izay hahafaly ny ankizy toy ny T-Rex animated hyper-realistic na fitsangatsanganana any am-piandohan'ny zanak'olombelona.
Ny Oceanogràfic any Valencia
Ny Oceanogràfic an'ny Tanànan'ny Zavakanto sy Siansa any Valencia no aquarium lehibe indrindra any Eropa, ary izy io no maneho ny ekôzistia an-dranomasina lehibe eto an-tany. Noho ny refy sy ny endriny ary koa ny fanangonana biolojika manan-danja azy dia miatrika aquarium tsy manam-paharoa eran'izao tontolo izao isika, ankoatra ny biby hafa, feso feso, antsantsa, tombo-kase, liona an-dranomasina na karazana mahaliana toa an'i belugas sy walrus, ireo santionany tsy manam-paharoa izany dia azo jerena ao amin'ny aquarium Espaniôla.
Ny tranon'ny Oceanogràfic tsirairay dia ahitàna ireto tontolo iainana anaty rano ireto: Ranomasina Mediterane, Tany mando, Temperate sy Ranomasina tropikaly, Oceans, Antarctic, Arktika, Nosy ary Ranomasina Mena, ankoatry ny Dolphinarium.
Ny hevitra ao ambadik'ity sehatra tsy manam-paharoa ity dia ny hahafantaran'ireo mpitsidika ny Oceanográfic ny toetra mampiavaka ny zavamaniry sy ny biby an-dranomasina avy amin'ny hafatra fanajana ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny tranon'ny Ratoncito Pérez any Madrid
Ny angano momba ny Fairy nify dia milaza fa ity biby mpikiky be fitiavana ity dia mikarakara ny fanangonana ireo nify kely misy ronono an'ireo ankizy rehefa lavo izy ireo mba hamela vola ho azy ireo ho takalon'ny ondana.
El Ratoncito Pérez dia niandoha tao amin'ny eritreritry ny mpivavaka Luis Coloma izay namorona tantara tamin'ny totozy ho mpiorina mba hampitony ny Mpanjaka Alfonso XIII tamin'ny fahazazany taorian'ny fahaverezan'ny iray tamin'ireo nifinono. Araka ny angano, ny totozy dia nipetraka tao amin'ny trano iray ao amin'ny arenal Street any Madrid, akaikin'i Puerta del Sol ary tena akaikin'ny Palacio de Oriente.
Androany, amin'ny rihana voalohany amin'ny laharana faha-8 amin'io làlana io, no misy ny Tranombakoka-tranon'ny Ratoncito Pérez izay azo tsidihina isan'andro afa-tsy ny alahady.
Ski any Granada
Ny Sierra Nevada Ski and Mountain Resort dia miorina ao amin'ny Sierra Nevada Natural Park, ao amin'ny tanànan'ny Monachil sy Dílar ary 27 km fotsiny ny tanànan'i Granada. Niorina tamin'ny 1964 izy ary 108 kilometatra skiable no miparitaka amin'ny tampon-tendrombohitra 115 (16 maitso, 40 manga, 50 mena, 9 mainty). Izy io dia manana tafondro ranomandry 350, sekoly ambiny dimy ambin'ny folo amin'ny ambaratonga rehetra ary boribory ski marolafy snowpark miampita serivisy hafa.
Sierra Nevada no gara farany atsimo any Eropa ary avo indrindra any Espana. Ny kalitaon'ny oram-panala, ny fitsaboana tsy manam-paharoa amin'ny tehezany ary ny tolotra fialam-boly mifameno dia ny fitakiana lehibe indrindra ho an'ireo mpanao ski.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy » Fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy
Toeran-kaleha dimy hitetezana irery